DAAWO SAWIRRO: Xoogaga Ahlu Sunna oo galabta dhoolatus Militari ka sameeyay Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Xoogaga Ahlu Sunna oo galabta dhoolatus Militari ka sameeyay Dhuusamareeb
DAAWO SAWIRRO: Xoogaga Ahlu Sunna oo galabta dhoolatus Militari ka sameeyay Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Waxaa caawa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ka socda kulamo kala duwan oo ay hor-boodayaan odayaasha dhaqanka, isla markaana lagu dhex-dhexaadinayo dowladda dhexe Soomaaliya iyo mas’uuliyiinta Ururka Ahlu Sunna.
Odayaasha dhaqanka ayaa la kulmay labada dhinac waxaana ay sheegeen in tabashooyinka ay qabaan xalin doono, islamarkaana aan loo baahneyn in xiisad laga dhex abuuro bulshada Magaalada Dhuusamareeb.
Dowlada Soomaaliya ay dadaal ugu jirta sidii uu ku shaqo bilaabi lahaa Guddigii ay Magacowday Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo maanta Guddoon doortay, islamarkaana Ahlu sunna ay kasoo horjeedo.
Waxaa aad loo adkeeyay ammaanka magaalada Dhuusamareeb, waxaana inta badan Ciidamo dheeraad ah la geeyay meelaha ay jooggaan Ahlusunna Madaxdooda.
Xoogaga Ahlu suna ayaa maanta la wareegay xarumo muhiim ah oo ku yaalo magaalada Dhuusamareeb, taasi oo cabsi weyn ku abuurtay Bulshada magaaladaasi.
Sidoo kale, Sheekh Shaakir iyo Macalim Maxamuud hoggaamiyaha Ahlusunna ayaa Jimcihii galabta dhoolatus ciidan ka sameeyay magaalada Dhuusamareeb, xilli gobalka Galgaduud laga dareemayo dhiil colaadeed.